Pejy fandokoana Dadabe Noely azo natonta sy miloko
Pejy fandokoana Nicholas
Iza io Nicholas io?
Ny fomba amam-panao isan-karazany
Nicholas sy ny lisitra faniriana ho an'ny Zanaka Kristy
Na dia tsy misy porofo firy momba ny fiainan'i Nicholas aza dia mbola iray amin'ireo olona manandanja indrindra ao amin'ny Fiangonana Masina izy. Nikolaus dia teraka tany Patara teo anelanelan'ny taona 270 sy 286 ary maty tamin'ny 6 Desambra.
Tsy fantatra ny tena taona nahafatesana, fa ny 6 Desambra dia ankalazaina ho fialantsasatra ampahibemaso any amin'ny antokom-pinoana kristiana maro. Ny fanindriana ny rohy dia manokatra ny pejy mifanaraka aminy miaraka amin'ny maodely fandokoana:
Nicholas eo am-bala
Nicholas any anaty ala
Fa maninona isika no mankalaza an'i Nicholas?
Nikolaus dia teraka tany Patara teo anelanelan'ny 270 sy 286 ary maty tamin'ny 6 Desambra. Tsy fantatra ny tena taona nahafatesana, fa ny 6 Desambra dia ankalazaina ho fialantsasatra ampahibemaso any amin'ny antokom-pinoana kristiana maro.
Nahoana isika no mankalaza an'i Nicholas? - © Kzenon / Adobe Stock
Nicholas dia evekan'i Myra tao amin'ny faritr'i Lycia, izay anisan'ny Fanjakana Romanina tamin'izany. An'i Torkia ankehitriny ary antsoina hoe Demre ary episkôpà tamin'izany fotoana izany. Ny dadatoan'i Nicholas no eveka ary natokana ho eveka izy tamin'ny faha-19 taonany.
Voalaza fa niasa tamina abbot tao amin'ny monasiteran'i Sion any amin'ny faritr'i Myra izy ary voasambotra sy nampijaliana tao nandritra ny fanenjehana nataon'ny Kristiana. Araka ny angano dia tsy maintsy nizara ny harena azony tamin'ny maha zanaka ray aman-dreny manan-katao ny mahantra izy.
Na dia mahafantatra an'i St. Nicholas aza ny ankizy rehetra ankehitriny, dia mamboly amin'ny fomba hafa ny fomba amam-panao manodidina azy. Any Alemana dia misy fomba amam-panao samy hafa be arakaraka ny faritra sy any amin'ny firenen-kafa ny fialantsasatr'i St. Nicholas dia ampiasaina ho solon'ny Krismasy.
Fahita izany, ohatra, any Netherlands, toerana nahatongavan'ireo Sinterklaas Andrasana amin'ny tapaky ny volana novambra izao ny sambo. Espana dia fahefana mpanjanatan'ny Holandey ary noho izany dia afaka nandefa lehilahy hendry avy lavitra. Isan-taona ny sambo miantsona amin'ny seranana hafa ary avy eo Nikolaus mitsidika ny tanàna seranan-tsambo sy ny tanàna manodidina.
Tsy irery izy amin'izany, fa miaraka aminy any Netherlands izy Zwarte pietiza no tompon'andraikitra amin'ireo ankizy tsy tsara fitondran-tena. Ny alin'ny Noely tena izy miaraka amin'ny fanomezana dia Pakjesavond ny andro teo.
Amin'ny faritra sasany any Suisse dia misy koa ny Andro St. Nicholas amin'ny 6 Desambra Réveillon, izay mampifandray ihany koa ny Fetin'ny Taom-baovao amin'ny fetin'ny olo-masina. Any Styria, Aostralia, nosoloin'i St. Thomas i Nikolaus ary nankalazaina tamin'ny 21 Desambra ny fetin'i St. Thomas Nicolo.
Ny fomba ankalazana an'i St. Nicholas any amin'ireo firenena eoropeana mifanila aminy, arakaraka ny fomban-drazany ihany, dia ankalazaina any Alemana ihany koa. Toy ny saika hatraiza hatraiza, St. Nicholas dia antenaina any Alemà manao akanjootin'ny eveka, miaraka amin'ny tehin'ny evekany sy ny satrok'ilay eveka.
I Santa Claus, izay niseho tamin'ny akanjo mena maoderina nandritra ny am-polony taona vitsivitsy, dia noforonin'ny mpamokatra zava-pisotro amerikana iray izay nampiasaina tamin'ny fanaovana dokambarotra ary ankehitriny dia matetika no antsoina hoe Santa Claus. FA: Nicholas tenany dia tena mpivavaka
Ny Dadabe Noely rehetra dia mitondra fanomezana miaraka amin'izy ireo, na inona na inona fitafiana mifanaraka amin'ny maodely ara-pinoana na mifanaraka amin'ny fenitra maoderina. Tian'ny ankizy izy - na dia somary manjavozavo kely aza - efa nahazo fanomezana kely sy vatomamy avy aminy izy ireo. Io dia mampihena ny fotoana fiandrasana mandra-pahatongan'ny Krismasy ary, arakaraka ny toe-javatra, tsy ny fanirian'ny ankizy ihany no mitombo amin'ny Andro St. Nicholas, fa koa ireo fanomezana.
Na izany aza, manontany momba ny fomban-drazana taloha ihany koa i St. Nicholas ary miorina amin'izany Fanoharana momba ny talenta nankinina nitsidika ny ankizy, na ho tsara toetra sy mpivavaka be izy ireo. Amin'ity fanoharana ity dia mpanompo telo no nanankinana vola madinika hampiasaina araka ny talentany. Nanontaniana momba izany izy ireo taty aoriana, ary izany no fototry ny fanontanian'i Nicholas an'ireo ankizy.
Ny lazaina Fampiasana inlay, izany hoe ny famenoana baoty, dia miverina amin'ny angano momba ireo virijiny telo izay nahazo fanomezana avy tamin'i St. Nicholas tamin'ny alina. Vokatry ny fanavaozana manohitra ny fanajana ny olo-masina, ny fomban-drazana St. Nicholas amin'ny maha-mpanome fanomezana dia nosoloin'i Kristy zaza; any amin'ny faritra sasany dia zava-dehibe kokoa i St. Nicholas amin'ny maha-mpanome fanomezana.
Izany koa Manoratra ny lisitra faniriana miverina ela, izay tonga tamin'ny alàlan'ny taratasy ho an'i St. Nicholas na ilay Christ Child. Biraon'ny paositra Krismasy manokana no azo anaovana mailaka fanodinana. Ny sambo kely Santa Claus taloha, izay natao tinkered mba hahafahan'i Santa Claus mametraka ny fanomezana ao aminy, dia fomba fanao taloha ihany koa.
Taty aoriana dia nosoloina baoty, kiraro na stockings ilay sambo, tany amin'ny faritra sasany, feno takelaka vita amin'ny mofo, gingerbread, sôkôla, paoma, voasary ary voanjo ny takelaka St. Nicholas. Amin'ny alin'ny Fetin'i St. Nicholas, ny kiraro sy kaontenera hafa dia apetraka eo anoloan'ny varavarana, vao azo alaina amin'ny maraina. Izy io koa dia mety misy Santa Claus voaendy, ny Weckmann, tahaka ny ahalalanao azy avy amin'ny Fetiben'i St. Martin.
Voatonona hatrany i Nikolaus mifandraika amin'ny ankizy tsara sy salama, azon'izy ireo ny fanomezana sy vatomamy nantenain'izy ireo. Amin'ny fetin'ny krisimasy dia azo antoka fa handre ny ankizy sasany fa hanasazy an'i St Nicholas amin'ny tsorakazony. Mba hahafahany manara-maso ny zava-drehetra, matetika izy dia manana "boky volamena" miaraka aminy, izay manamarika izay rehetra momba ny zaza tsirairay avy.
Ka afaka manapa-kevitra izy raha te hahazo zavatra tsara amin'ny lasakan'i Dadabe Noely na hanefy ilay tehina. Amin'ny toerana maro dia mitondra mpanampy iray izay antsoina amin'ny fomba hafa arakaraka ny faritra izy. ny Krampus dia any Aotrisy, Hongria, ny Repoblika Tseky ary ny faritra sasany any Kroasia sy ny faritra avaratr'i Italia ny orinasan'i St. Nicholas ary mampatahotra ireo lazaina ho zaza ratsy. Izany koa Klaus mitondra fiara any Oberallgäu dia iray amin'izy ireo, any Berchtesgadener Land dia ny Perchten na ny Buttnmandl. Any amin'ny faritra avaratr'i Alemana dia ny mpanompo Ruprecht no miaraka amin'i Nicholas, ary koa ny Zwarte piet any Holandy dia mpandehandeha toy izany.
Pejy fandokoana Nicholas | fialantsasatra ho an'ny daholobe
Famotorana sary Nicholas - Tadiavo ireo fahasamihafana